Ahoana ny famonoana Linux amin'ny Azure, Fizarana I: Ny fotokevitra - ITS Tech Tech
Ahoana ny famoahana Linux amin'ny Azure, Fizarana I: Ny fotokevitra
Nanolotra soso-kevitra vitsivitsy tao amin'ny Linux sy ny vondrona open source nandritra ny roa taona farany i Microsoft. Ny zava-drehetra ampiasaina amin'ny SQL Server sy Visual Studio amin'ny Linux mba hanamboarana shell manga marina ao amin'ny Windows 10. Tamin'ny Novambra 2016, Microsoft dia niditra tao amin'ny Linux Foundation ho toy ny platinum. Amin'ny ankamaroan'io dia mety ho tsy dia hita loatra ny voalohany, ary avy amin'ny fomba fijery maro no tena ilaina indrindra, Microsoft sehatra hahatakarana sy hanamafy tanteraka Linux-Microsoft Azure. Ilaina ny mizara ampahany amin'ireo antony voalohany nahatonga ahy ho mpandraharaha lehibe ho an'i Linux amin'ny Azure.
Linux dia ampahany amin'ny mpilalao ao amin'ny Azure
Rehefa nanomboka namotopototra momba ny hazakazaka Linux aho, dia vonona ny haka fomba vaovao hifandraisako amin'ny asa ao Azure aho. Niara-niasa tamin'ny (tsotra, mitazona amin'ny ankapobeny) azure aho satria ny fanombohana misokatra voalohany indrindra. Nanao ny dingana avy amin'ny sehatry ny injeniera aho mba hiorenan'ny fototra ary na dia avy amin'ny iray amin'ireo Azure mba hampifanaraka roa. Vonona ny hanao ny hetsika ho an'i Linux amin'ny Azure aho.
Nihodina aho, noresahako izany. Ny raharaham-barotra azony dia vao haingana - ny fototra. Miasa toy izany koa izy ho an'ny Linux rehefa manatanteraka ny Windows izy, indrindra ny fomba andrasanao fiovana na firewall-nao hiasa amin'ny fanaovana fanajana kely amin'ny dingana fampiasana izany. Ho marin-toetra, dia somary nihomehy tsy nisy dikany izany.
Nandritra ny fotoana farany vao haingana, Microsoft dia nanatsara ny fanatsarana heveriny ho zava-bitany sy ny zavatra mifandraika amin'ny loharano misokatra rehefa lazaina fa vita sy Linux manokana. Tsy hita intsony ny loharanom-baovao, mety hiteny isika fa misy hazavana ratsy. Azure ny Microsoft Azure raha toa ka miharihary izany ary ity no dingana lehibe indrindra amin'ny Microsoft izay ahitana ny fampidirana Linux.
Tena azo antoka ny fahitanao (izay ho renao amin'ny fampidirana Microsoft amin'ny Azure) dia ny toerana iray mihoatra ny 40 isan-jaton'ny milina virtoaly vita amin'ny alàlan'ny azure dia tena Linux no mifototra. Niditra tamin'ny fampidiran-dresaka vitsivitsy izay nanambaran'izy ireo aho fa io no ampahany lehibe amin'ny asa fanatontosana vaovao, na ahoana na ahoana fomba lehibe dia lehibe. Hamarino ny fanalefahana ny 10 taona ary hampahafantarana an'i Microsoft izany latsa-pitenenan'ny asa vaovao amin'ny tontolo tena ilaina izany dia Linux. Mety ho mahafinaritra izany, nefa adinoko.
Nankany amin'ny fivoriana i Microsoft, nefa izy rehetra izao. Ny fanolorana loharanom-paritra Linux ao Azure dia tsotra tahaka ny fananganana loharano Windows. Arakaraky ny maha-zava-dehibe kokoa, ny loharanom-pitaovana Linux dia miha-mahazo sy mahasoa ao Azure. Ny Microsoft dia efa nifamotoana niaraka tamin'ireo mpihazakazaka hajaina vitsivitsy mendri-piderana hizara ho an'ny orinasa eo amin'ny fototra, ny sehatra sy ny programa. Ny mpamatsy, ohatra, Red Hat sy Docker dia manana fitantanana izay azo atao ao anatin'ny minitra ao Azure. Ny governemanta open source, ohatra, Redis Cache sy Chef dia foiben'ny sampana azonao amin'izao fotoana izao.
Sarotra ny manangana sy manara-maso ireo loharano Linux ao Azure
Ny orinasa fototra ao Azure dia manome linux mitovy mpilalao amin'ny Windows. Ny fototry ny rahon'ny foibe dia mametraka sehatra fototra telo: fitahirizana, fandaminana ary tarehimarika. Ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-manaon'ny fitantanana ao Azure dia ny rationalistes OS, izay midika fa hanao asa mitovy amin'izany izy ireo raha toa ka mihazakazaka Windows na Linux.
Ny tena manan-danja izay manova marina dia ny rafitra miasa eo amin'ny milina virtoaly. Tsara izany ary mazava ho azy fa ireo fampiharana miasa ao anatin'ny rafitra miasa.
Azure azonao atao ny mamolavola ny ankamaroan'ny loharano hafa alohan'ny hanaovana ny milina virtoaly, ary mifamatotra tanteraka ny solosaina virtoaly amin'ny loharano tena izy. Azonao atao koa ny manao ny ampahany betsaka amin'ny loharano avy hatrany amin'ny fampiasana ny laharana baoritra na ny fidirana. Ny fomba fiasa dia mitovy ihany koa raha toa ka manamboatra loharano Windows na solosaina Linux ianao.
Araka ny filazan'ny olona vitsivitsy ahy dia Windows iray ihany aho, kanefa mampiasa mpanjifa Linux aho mba hanatontosa sy hanara-maso ny zava-drehetra ao Azure mandritra ny fotoana fohy. Amin'izao fotoana izao, raha ny marina dia izaho no mampiasa ny shell GUI, kanefa nampiasa ny shell Bash ho an'ny ankamaroan'ny asa vita sy ny fitazonana milina virtoaly. Manome fandaharanasam-pampandrosoana maromaro i Microsoft, ohatra, CLI na XPLAT CLI, noho ny tsy fahafaha-miala amin'ny sasantsasany, izay ahafahanao manara-maso tanteraka an'i Azure. Ohatra, raha hanao milina virtoaly ianao, dia azonao ampiasaina:
azure vm make -Q kanonika: ubuntuserver: 14.04.4-LTS: farany ...
Ny rafitry ny sehatra iraisam-pirenena dia tena azo tsapain-tanana. Tena hitako ny rafitry ny fiantohana ny fitaovana CLI izay mahazatra kokoa noho ireo fitaovana PowerShell (izay fitaovana tena ilaina amin'ny filaharan'ny fehezan-dalàna momba ny fepetra Windows).
Maro ny antony manosika hampiasa Linux amin'ny Azure. Karohy ny fizarana roa amin'ity lahatsoratra ity izay hifanakalozako ny fampihavanana, ny fampitomboana, ny fiarovana ary ny dev-operations. Fomba roa fohy sy mahatalanjona izay manome anao ny traikefa ilaina mba ahafahana mihazakazaka sy mihazakazaka miaraka amin'i Linux amin'ny Azure amin'izao fotoana izao.
Lisitry ny karama farany ambany amin'ny 15 amin'ny 2017